Fifty Shades Of Grey (မြန်မာစာတန်းထိုး) | OKKALA STORE
Chappie (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
မေလ (၂၈) ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်၊ Centara ...
Myanmar Ancient Mysteries Revealed
ဖုန်းဗားရှင်းအမြင့်တွေကိုတောင် Root ဖောက်နိုင်တဲ့ ...
ခြောက်..ခြောက်...ခြောက် ( မြန်မာသရဲကားသစ် - ခန့်စ...
Sexy အရမ်းကျလွန်းတာကြောင့် Banned ခံရတဲ့ ကိုရီးယား...
Snoop Dogg - California Roll ft. Stevie Wonder, Ph...
ဒဂုံမန်းရထားပေါ်က အန်တီမမ ( 18 + အချစ်ဝတ္ထု)
Lionel Messi All 43 Goals In La Liga 2014-2015 HD
Cristiano Ronaldo All 61 Goals ● 2014/2015 HD
The Dead Lands (2014) (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Maggie ( 2015 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Iron Corss မှ ကိုလေးဖြူရဲ့ Live 90 Min Live Show ...
တစ်​​နေ့လုံးတစ်​ညလုံး [ဥဂ္ဂါ သီချင်း​ခွေအသစ်[Album...
Life of Pi ( 2012 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
မျိုးကြီး ရဲ့ မင်းရှိတဲ့မြို့
ORIGINAL GANGSTER ( မြင့်မြတ် + ယုန်လေး + မင်းဦး ...
တေလာဆွစ် ရဲ့ သီချင်းအသစ်ပါ Taylor Swift - Bad Bloo...
မေလ (၁၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Sule Shingri-La Hotel မှ...
Fast And Furious7(2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
ယောက်ျားသရုပ်ဆောင်များ ရှားပါးလာသော်လည်း ဂျပန်အပြာ...
Jupiter Ascending (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Nineteen: Shh No Imagining (2015) ( Korea Love Mov...
The Man With The Iron Fist2(329 MB) မြန်မာစာတန်း...
တကယ်ရှိတယ် - မြန်မာဗီဒီယို သရဲကား ( လူမင်း + မင်းဥ...
The Eyes Diary (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဧပြီလ (၂၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Chatrium Hotel မှာ ကျင...
BIGBANG ရဲ့ 2015 သီချင်းသစ် LOSER
Mayweather နှင့် Pacquiao တို့ရဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲ အစအဆု...
Fifty Shades Of Grey (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Fifty Shades of Grey ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရဲ့ လတ်တလော လူပြောအများဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်နေပါတယ်။ ရုံမတင်ခင်ကတည်းက စောင့်ကြည့်ဖို့ အားတင်းထားကြသူတွေ များပြားလှတဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာ တကယ်တမ်း ရုံတင်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ စံချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီး တဟုန်ထိုးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေ မှိုချိုးမျှစ်ချိုးပြောနေပေမယ့် သူ့ရဲ့ဝင်ငွေက သန်း ၅၀၀ ကျော်သွားပါပြီ။ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားကို ၂၀၁၆ မှာ ထပ်မံဖြန့်ချိပါမယ်။
ဒီဇာတ်ကားဟာ လိင်အသားပေးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှစာရေးဆရာ E. L. James ရဲ့ Fifty Shades Of Grey ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဇာတ်လမ်းချုံ့ကာ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်ဟာ လိင်အသားပေးစာအုပ်ဖြစ်ပြီး မထွက်ခင်ကတည်းက အတိုက်အခံတွေ များခဲ့တာပါ။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့ ဝေဖန်မှုတွေ ပြင်းထန်တာကြောင့် e-book အနေနဲ့ စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ လူကြိုက်များကာ ဖတ်ရှုသူများပြားလွန်းတာကြောင့် မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ပုံနှိပ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ပရိသတ်က စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဖို့ ဝိုင်းတောင်းဆိုကြပါပြီ။ (သူတို့တွေတောင်မှ e-book ဖတ်ရတာထက် စာအုပ်နဲ့ဖတ်ရတာကိုသာ ပိုနှစ်သက်ကြတာပါ။) စာအုပ်တွေရိုက်ရလွန်းလို့ စာရွက်ထုတ်ပေးတဲ့ ဒေဝါလီခံခါနီး စက္ကူစက်ရုံတစ်ရုံဟာ အဲဒိစာအုပ်ကြောင့် ပြန်လည်လည်ပတ်သွားကာ ပိုင်ရှင်တောင် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲဒိနောက် Volume II နဲ့ III ကို ဆက်လက်ထုတ်ဝေပါတယ်။ အခုဆိုရင် စီးရီးတစ်ခုလုံးကို ဘာသာပေါင်း ၅၂ ဘာသာကို ဘာသာပြန်ဆို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးပါပြီ။ အုပ်ရေပေါင်း သန်း ၁၀၀ ကျော် ရောင်းချခဲ့ပြီးပါပြီ။ အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်မှာ အရောင်းရဆုံး Best-Seller စာရင်းကို အမြန်ဆုံးတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လိင်အသားပေးဖြစ်ကာ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း တလှိမ့်လှိမ့်ကြွတက်လာအောင် ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ ဝိုင်းပြီးတော့ ဝေဖန်ခံနေရဆဲပါပဲ။
အမေရိကန်နိုင်ငံက စုံတွဲတစ်တွဲမှာဆိုရင် ကောင်လေးဖြစ်သူက ကောင်မလေးကို အဲဒိစာအုပ်ထဲက ပုံစံတွေအတိုင်း လိင်ဆက်ဆံကြရအောင် ပူဆာပါတယ်။ ကောင်မလေးက ငြင်းလိုက်တာကြောင့် ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်က အဲသလောက်ထိတောင် လွှမ်းမိုးသွားပါပြီ။
ဗြိတိသျှက လင်မယားနှစ်ယောက်မှာလည်း အဲသလိုလုပ်ကြဖို့ မိန်းမကတောင်းဆိုတာကို ယောက်ျားဖြစ်သူက ငြင်းလို့ မိန်းမက ကွာရှင်းလိုက်ပါတယ်။ လိင်စိတ်မူမမှန်ဘူးလို့တောင် သူ့မိန်းမက စွပ်စွဲခဲ့ပါသေးတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့လင်မယားနှစ်ဦးမှာ ကောင်လေးဖြစ်သူက ဒီစာအုပ်ကို အခြေခံထားတဲ့ လိင်ဂိမ်းကို ဆော့ကစားနေရင်း စိတ်ပြောင်းလဲကာ မိန်းမဖြစ်သူကို သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေးကို နိုင်လွန်ကြိုးတွေနဲ့ တုပ်ပြီး ကျောက်သင်ပုန်းညွှန်တံနဲ့ ၁၂၃ ချက် ရိုက်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အမျိုးသားတစ်ဦးက သူ့အမျိုးသမီးကို အဲဒိစာအုပ်ဖတ်နေတာတွေ့လို့ မျက်နှာကို အချဉ်ရည်နဲ့ ပက်ပစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကလည်း စာအုပ်ဖတ်ကာ ကောင်းကောင်းမဖတ်ဘဲ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခန်းတွေ၊ စာပိုဒ်တွေကို အသံအကျယ်ကြီးထွက်ဖတ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒိအတွက် အဲဒိအမျိုးသား အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။
Geisha Ball လို့ခေါ်တဲ့ စအိုထဲထည့် ဘောလုံးကြိုးလေးတွေဟာ စာအုပ်ဖြန့်ချိပြီးတဲ့နောက်မှာ အဆ ၄၀၀ ကျော် ရောင်းအားခုန်တက်သွားပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့ကဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အရင်ကထက် အဲဒိဘောလုံးကြိုးတွေ ရောင်းအား ၁၀ ဆ တက်သွားပါတယ်။ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြရရင် အဲဒိ Geisha Ball လေးတွေကို Burmese bells (မြန်မာခေါင်းလောင်းလေး)တွေလို့ ခေါ်ပါသေးတယ်။
စာကြည့်တိုက်တွေမှာရှိတဲ့ Fifty Shades Of Grey စာအုပ်တွေမှာ လိင်ကတစ်ဆင့်ကူးဆက်တတ်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ (ဖတ်တဲ့သူတွေက ဖတ်ရင်း သူတို့အင်္ဂါနဲ့ စာအုပ်ကို ထိပေးလိုက်လို့လား မသိပါဘူး)။ နောက်ပြီး စာရွက်တွေကြားထဲမှာ ကိုကင်းတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။
တိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း စာအုပ်တွေကို စုပုံမီးရှို့ရအောင် သူတို့ဆီ လာလှူကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ပထမဆုံးရလာတဲ့ စာအုပ် ၂၄ အုပ်ကို recycle လုပ်ကာ အိမ်သာသုံးစက္ကူလုပ်ပစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ထိ လူပြောများတဲ့ စာအုပ်ကို ဇာတ်ကားအဖြစ်ရိုက်ကူးရာမှာလည်း ပီပြင်ပြောင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသားက ဇာတ်လမ်းအတွက် ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ စင်ပေါ်မှာ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆက်ဆံတာကို စင်အောက်ကနေ ဘီယာလေးသောက်ပြီး အရသာခံကြည့်ရတဲ့ ကလပ်မျိုးကို ညတိုင်းသွားပြီး လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းရိုက်ရာမှာ မင်းသမီးနဲ့မင်းသား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက် ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေက အဝေးမှာနေကာ zoom ဆွဲပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
မကြာခင်မှာ အခွေထွက်လာတော့မှာပါ။ ဒီလိုမျိုးရေးတင်ပေးလို့ တစ်မျိုးမထင်ကြပါနဲ့။ ဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းလဲလို့ ကွှန်တော် မရေးပြထားပါ။ spoiler လည်း မဖြစ်တော့ပါ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ပညာပေးဇာတ်လမ်းပါ။ ကြည့်သင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက် တင်ပေးတာပါ။ ဗဟုသုတလည်းရ၊ ရှောင်ရန်လေးတွေလည်း သိသွားတာပေါ့။ ကိုယ့်ချစ်သူကို အလိုလိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ။ အန္တရာယ်သိပ်မရှိပါဘူး။ စာအုပ်ဖတ်ရတာလောက်တော့ စိတ်တွေ မဖောက်ပြန်ပါ။
Fifty Shades OF Grey Movie Download Link>>>>https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZyJDXZviysuPVLhQLgfJdSMfdww4OYe8L7
(ဇာတ်ကားအညွန်းကို Movie Locosမှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
Posted by okkala net at 6:09 PM